EU inoshora rusaruro LGBT + sezvo Hungary ichipa mutemo mutsva unokakavara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hungary Kuputsa Nhau » EU inoshora rusaruro LGBT + sezvo Hungary ichipa mutemo mutsva unokakavara
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hungary Kuputsa Nhau • LGBTQ • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tsamba yacho inoti "kuremekedza uye kushivirira ndizvo zvakakosha pabasa reEuropean," uye inovimbisa "kuenderera mberi nekurwisa rusarura kunharaunda yeLBBTI."
Kuremekedza uye kushivirira zviri pakati pebasa reEuropean chirongwa.
Tsamba yacho inonyorerwa kumusoro kwendarira yeEU uye inouya pamberi peInternational LGBT + Pride Day muna Chikumi 28.
Tsamba iyi ine mazita gumi nematanhatu, asi Chancellor weAustria Sebastian Kurz akawedzerawo siginecha yake mushure mekunge tsamba yaburitswa, zvichiunza huwandu hwevasainira kusvika gumi nemanomwe.
Misoro ye17 European Union (EU) nyika dzakaburitsa tsamba yakabatana ichisimbisa kuzvipira kwavo kurwisa LGBT + rusarura.
Tsamba iyi yakaburitswa zuva rapfuura mushure mekunge EU Komisheni yavimbisa kumhan'ara zviri pamutemo pamusoro peHungary pamusoro pemutemo wayo mutsva unorwisa LGBT +, uye yakatumirwa nemutungamiri weLuxembourg, Xavier Bettel paTwitter.
Tsamba yacho inoti "kuremekedza uye kushivirira ndizvo zvakakosha pabasa reEuropean," uye inovimbisa "kuenderera mberi nekurwisa rusarura kunharaunda yeGBBTI."
Pakati pevakasaina ndiMutungamiri weFrance, Emmanuel Macron, Chancellor weGerman Angela Merkel, makurukota eItari neSpain, pamwe nevatungamiriri venyika dzeScandinavia neBaltic, pakati pevamwe.
Tsamba yacho inonyorerwa kumusoro kwendarira ye EU uye inouya pamberi peInternational LGBT + Pride Day muna Chikumi 28. Haina kutumidza zita reHungary zvakajeka, asi rinouya zuva mushure meEuropean Commission yakavimbisa maitiro epamutemo kurwisa Hungary, nemutungamiri wekomisheni, Ursula von der Leyen, achisheedza mutsva weHungary anopesana- LGBT + mutemo "zvinonyadzisa."
Gwaro iri rakaburitswa apo vatungamiriri veEU vanoungana muBrussels kumusangano wekuzeya "matambudziko epasirese nenyaya dzezvematongerwo enyika." Paakasvika pachiitiko ichi, Mutungamiriri weHungary, Viktor Orban, akadzivirira mutemo unokakavara, wakapihwa neparamende yenyika svondo rapfuura, inorambidza zvinhu zvekuchikoro kusanganisira zvirimo zveLGBT + zvevana.
Iyo paramende yeHungary yakapasisa bhiri svondo rapfuura, asi rinofanirwa kutsigirwa nemutungamiri wenyika kuti atange kushanda. Iyo inorambidza kugovana zvemukati nezve ungochani kana kuisazve bonde kune vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere muzvirongwa zvekudzidzisa nezvebonde, mafirimu kana kushambadza. Hurumende inoti zvakaitirwa kuchengetedza vana asi vashoropodzi vemutemo vanoti zvinobatanidza ungochani nehurefu.
Chancellor weGerman Angela Merkel akataura kuti anofunga kuti "mutemo uyu hauna kunaka, uye haupindirani nepfungwa yangu yezvematongerwo enyika - kana iwe uchibvumira ungochani, kudyidzana kwevanhukadzi nevanhurume chete asi uchirambidza ruzivo pamusoro pavo kumwewo, izvo zvine chekuita nerusununguko rwekudzidza uye senge. ”
“Mutemo wakabvumidzwa. Haisi yezveungochani, ndezve dzidzo kuva nyaya yevabereki, "Orban akaudza venhau.
Mutemo uyu chikamu chebhiri hombe riri kurwisa mhosva dzepabonde dzinoitirwa vana vadiki, uye zvakonzera kushoropodzwa kwakasimba kubva kuBrussels sekutyisidzira kwehunhu hweEurope. Vatsoropodzi vanoti bhiri rinosarura uye rinozvidza nharaunda ye LGBT +. Hungary yakadzivirira izvo zvakatsigirwa nevese vari kutonga bato uye vanopikisa. Inosimbirira kuti mutemo "unochengetedza kodzero dzevana" uye unoramba kuti une rusarura.
Hurumende yaVaMutungamiri Viktor Orban vakapomera von der Leyen kuita "manyepo" uye vakati bhiri iri "harina rusarura" nekuti "harishande kune kodzero dzevaya vane makore anopfuura gumi nemasere."
Musangano weEU unosangana muBrussels musi weChina neChishanu, kuzokurukura COVID-19, kugadzirisa hupfumi, kutama, uye hukama hwekunze, maererano nehurongwa hwepamutemo.